I-Direct Drive Auto Belay | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
I-Direct Drive Auto Belay
I-Perfect Descent Auto Belays yakhiwe ngesandla e-USA futhi incanyelwa umhlaba wonke ngabagibeli nabanikazi bokuzivocavoca ngokufanayo. Njengomhlinzeki Osemthethweni we-Auto Belay we-International Federation of Sport Climbing, i-Perfect Descents iyasetshenziswa emncintiswaneni weNdebe Yomhlaba kanye ne-World Championship. Ukunikela ngokusebenza okuphezulu ngentengo ephezulu, ama-auto belays ethu abumbene, ahlala isikhathi eside, futhi alungele isabelomali, aziqhayisa ngezindleko eziphansi kakhulu zobunikazi emakethe. Izizinda Eziphelele zilungele izindawo zokuqwala amatshe, izindonga zokukhuphuka kwekamu, izikhungo zokuzijabulisa zaseyunivesithi, izifundo zezihibe ze-ninja, izikhungo zokuzijabulisa, ukuqeqeshwa kwezimboni, nokuningi!
Thola othengisa kabusha eduze kwakho
Mayelana: I-Perfect Descent Direct Drive Auto Belay
IDirect Drive ™ Auto Belay evela ku-Perfect Descent Climbing Systems ifaka isigaxa esivaliwe, intengo ehamba phambili embonini, futhi iyahambisana ne-EN. Le modeli yisixazululo esifanelekile se-auto belay sezinhlelo zokusebenza lapho isivinini singesona isici. IDirect Drive ™ ilungele imizila yabaqalayo, izingxenye zezingane, nemicimbi ehlelwe. Vumela umsebenzi wakho ube mncane!
I-Perfect Descent ingumholi wezindleko kuma-auto belays futhi inezindleko eziphansi kakhulu zobunikazi ngaphezu kwempilo yeyunithi.
Umklamo osindayo futhi ohlangene ulingana nezindleko zokuthumela eziphansi lapho kubuyiselwa amayunithi wensizakalo egunyaziwe yasefektri nokwenziwa kabusha.
Inethiwekhi ekhulayo yezikhungo ezihlinzeka ngemisebenzi yasefektri ikwenza kusheshe futhi kube lula ukugcina amayunithi akho esebenza nasodongeni.
Ubuciko, ukuphepha, nokwenza izinto ezintsha:
IPerfect Descent Auto Belays yakhiwe ngesandla eColorado, e-USA, ifaka indlu engenazinsimbi esezingeni eliphakeme nezezindlu ze-aluminium (akunapulasitiki), futhi ayikhiqizwa ngobuningi.
Izingxenye zangaphakathi zenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ezimelana nokusetshenziswa okuphindaphindwayo futhi ezidinga ukunakekelwa okuncane.
Onke amadivayisi ahlangabezana nokuqinisekiswa kwekhwalithi eqinile ngaphambi kokuthumela futhi ahlangabezane nezindinganiso zokuphepha zomhlaba wonke.
Indlu yedivayisi eguquguqukayo futhi ehlala isikhathi eside:
Ama-Descents aphelele yi-auto belay elula kakhulu futhi ehambisanayo emakethe, isici esiyinhloko sokuhudula nokufaka okulula.
Isibambi esisha sokufakwa kwamaphoyinti amaningi sinikeza izinketho zokufaka eziguquguqukayo namehlo wesipele azimele.
Onke amayunithi avalelwe ukusebenza okuvelele ngaphakathi nangaphandle.
Imisila yenkomo yokuthanda:
KUBALULEKILE: I-Perfect Descent Auto Belays yenzelwe ukuthi ilawulwe ukwehlisa amadivayisi asetshenziswa emisebenzini ekhuphuka ebheke phezulu futhi ayikulungele ukusetshenziswa emisebenzini yohlobo lokugxumagxuma edala ukulayishwa kokushaqeka. Ukuphindaphindwa kokulayishwa kokushaqeka kwedivayisi kungalimaza izingxenye zangaphakathi, futhi kwezinye izimo, kungaholela ekuhlulekeni kweyunithi. Imisila yenkomo kufanele ihlale ilingana noma ikhudlwana ngobude kunokuphakama okulindelekile kokukhuphuka. Amayunithi anobude benkani yenkanyamba ngokweqile angahlangabezana nokuqothuka kwemisila yenkomo okungafanele okungaholela ekwehleni okushisayo noma okusheshayo. Ngaso sonke isikhathi khetha imisila yenkomo ehambisana kakhulu nobude obukhuphukayo futhi ugweme ukusebenzisa imisila yenkomo emide ezindongeni ezimfushane.
Isisindo: 29 - 31 lbs (13.1 - 14.1 kg)
Ubukhulu Bezindlu: 16 x 9.5 x 7.5 in (40 x 24 x 19 cm)
Isivinini sokubuyisa i-Lanyard: 2 ft / s (0.6 m / s)
Isilinganiso Sokwehla Esiphezulu: 6.6 ft / s (2 m / s)
Isilinganiso Esincane Sokwehla: 1.6 ft / s (0.5 m / s)
Izinto Zezindlu: Insimbi Engagqwali, i-Aluminium, ne-Acetal
Izinto (ze) Zomlomo wombhobho: I-Aluminium Anodized
Ibanga Lesisindo Somsebenzisi: 25 - 310 lbs (11.5 - 140 kg)
I-ANSI / ASSE Z359.4: Izidingo Zokuphepha Kwamasistimu Wokusiza Nokusindisa, Amasistimu, Nezingxenye
Ihambisana ne-EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 Version 1 ne-EN360: 2002. - Kudinga ukuphindwaphindwa ngezikhathi ezithile njalo ezinyangeni eziyi-12 noma kungekudala njengoba kunqunywe Umuntu Onekhono
I-AS / NZS 1891: Ama-Industrial Fall-Arrest Systems namadivayisi - Ingxenye 3: Amadivayisi Wokubamba Ukuwa
I-CSA Z259.2.3-99: Amadivayisi Wokulawula Okwehla